Banyere Anyị - Cepai Group Co., Ltd.
- ụlọ ọrụ anyị -
Hlọ ọrụ HQ na R&D nke otu CEPAI dị na etiti ego nke China - Shanghai na ụlọ ọrụ anyị dị na Shanghai Songjiang Economic Development Mpaghara na Jinhu Economic Development Mpaghara, na mpaghara akụ na ụba nke Yangtze River Delta.
The ụlọ ọrụ na-ekpuchi ebe ndị 48000 square mita, na 39000 square mita maka omumuihe. N'ime afọ iri mmepe ngwa ngwa, otu CEPAI eguzobewo ngalaba ise, gụnyere Shanghai CEPAI Investment Management Co., Ltd. KIST Valve Co., Ltd. CEPAI Group Valve Co., Ltd. CEPAI Group Pressure instrument Co., Ltd. CEPAI Group Instrument Co., Ltd. na CEPAI Group Great Hotel Co., Ltd. Dịka atụmatụ atụmatụ ahịa anyị, CEPAI Group raara onwe ya nye iwulite ahịa ya ọrụ na usoro ịre ahịa n'ịntanetị site na ụlọ na mba ofesi dabere na ahịa anyị dị. Ijide “iwu ọtụtụ mba na teknụzụ ndị na - eduga na ọrụ klaasị mbụ” dị ka ebumnuche anyị na-agba mgba, otu anyị na-etinye aka n’iwulite onye nrụpụta mara mma nke nwere ike dị ukwuu na ngwa njikwa, valves, na mmanụ ala mmanụ na - eme akara anyị ‘CEPAI’ na ụwa niile. mpi.
Ọnọdụ dị n'ihu maka ọzụzụ ndị ọrụ na teknụzụ R&D yana atụmatụ mmepe bụ nnukwu ọrụ ọsụ ụzọ nke ndị isi CEPAI mepụtara ruo ọtụtụ iri afọ, na atụmatụ mmepe nke "teknụzụ na-eme ka ụlọ ọrụ nwee ọganihu na mbido ụlọ ọrụ. Ihu na ike asọmpi na-esiwanye oké ahịa, anyị ụlọ ọrụ eguzobewo ahịa atụmatụ center na R&D alụmdi na Shanghai na 90s. Ugbu a, CEPAI otu achịkwa ọtụtụ isi teknụzụ na akụkụ ụfọdụ nke isi technology maka mba na shanghai, na kpụrụ ihe pụrụ iche na ngwaahịa R&D uru. CEPAI nwere akụrụngwa nke oge a, dịka ebe nhazi, igwe nyocha, akụrụngwa igwe CNC, ikuku plasma, ụlọ nyocha anụ ahụ na kemịkalụ, ịmịpụta eriri varnish, ịgbakọ na ntinye ntinye, ntinye akụrụngwa ma wụnye usoro mmepụta, ụlọ ọrụ ọgwụgwọ ọkụ. , ngwa nhicha nke onwe, nrụgide / iche nrụpụta transmitter production line na na. Ka ọ dị ugbu a, otu CEPAI ejirila ike ọrụ, akụ na ụba na akụnụba na-aga n'ihu ma mepụta ma melite ngwaahịa na ogo ngwaahịa ahụ. CEPAI otu guzosie ike imekọ ihe ọnụ na Chongqing University, Shanghai akpaaka Instrumentation Institute, Shanghai Jiao Tong University, Nanjing Southeast University, Shenyang akpaaka Institute, Shan Dong mmanụ ala akụrụngwa na ulo akwukwo wdg na ngwaahịa akara CEPAI valvụ na CEPAI ngwá ka n'ọtụtụ ebe etinyere na ọrụ dị iche iche, dịka mmanụ ala, kemịkalụ, ụlọ ọrụ na-ewepụta ihe, ígwè, ọgwụ, nri, akwa, ụlọ ọrụ agha, ihe edoghị anya, ụgbọ mmiri, ụgbọ elu wdg, wee nweta ezigbo aha na ndị ahịa anyị.
CEPAI bụ ọkachamara na R & D, rụpụta, ahịa na EPC nkwekọrịta ọrụ nke dị iche iche elu nsogbu mmanụ na gas wellhead akụrụngwa, ịkpagbu na-egbu usoro, slab n'ọnụ ụzọ ámá valves, bọl valves na nnukwu dayameta, ego valves, apịtị valves, plọg valves, apịtị -gas separator wdg niile na ngwaahịa na-nditịm gburu site ọkọlọtọ API-6A, API-6D, API-16C.CEPAI bụ ike inye a ngwugwu nke mmepe ngwọta na nke kasị nso oge. Ọtụtụ ndị ahịa na-amalite imekọ ihe ọnụ na CEPAI site na ijikwa ajụjụ mmepe, na-enwe obi uto site na CEPAI na-aza ngwa ngwa, ọrụ bara ụba na ọrụ na-ekpo ọkụ, ha maara na CEPAI bụ onye ha na ya na-achọ, wee nwee ike ịmalite ogologo oge. CEPAI nwere mmasi na nkpa gi ma di njikere inye osisa nsogbu nke gabigara ihe ichoro
CEPAI na ndi oru ngo, ndi n’eme mmanu na ndi n’enye mmanu, ndi n’eme mmanu, ndi na-ahucha mmanu na ndi nwere ihe ndi ozo ichikota usoro ichikota, tule ma kpota nsogbu na mmeghari. Iji na-agbaso ụkpụrụ nke API (American Petroleum Institute) CEPAI Group etinyela ihe karịrị 50 nde USD iji setịpụ otu n'ime ntọala mmepụta anyị nke na-arụpụta API 6A, API 6D, API 16C, ngwa ndị metụtara ya.
Site na ijikọ akụ na ụba ụwa taa, ndị CEPAI na-agbasi mbọ ike ịmepụta akara "CEPAI" mba ụwa. Ọdịnihu CEPAI --- a ga-etinye aka na ngwa, valvụ, na ụlọ ọrụ igwe mmanụ ruo mgbe ebighi ebi. Kedu ihe ọzọ, CEPAI Group raara onwe ya nye iji wulite akara ya na mmetụta mba ụwa na inye onyinye maka ọha mmadụ site na ebumnuche nke iguzobe ụlọ ọrụ na-ahụ maka teknụzụ na-achịkwa ụwa.
- Lelee Anyị na Omume! -
Companylọ ọrụ ahụ bụ Onye Ndú Mba, ụlọ ọrụ na-agbanwe agbanwe nke nwere ọtụtụ ndị ọrụ tozuru etozu.
CEtù CEPAI nwere ụlọ ọrụ nhazi igwe mita 35000 .N'ihi iji mezuo ihe a chọrọ iji mepụta valvụ na nnukwu ON na ọkwa dị elu, e nwere lathes kwụ ọtọ na 3.5 na 2 mita, lathes kwụ na 1 .8, 1 .25 mita Kedu ihe ọzọ, iji meziwanye nkenke nhazi na ndakọrịta nke akụkụ, enwere ngwá ọrụ igwe CNC pụrụ iche, na ebe nhazi mpaghara na ogbako igwe, nke a na-eji ebupụta mmepụta nso maka valvụ nwere ojiji dị mkpa na usoro mgbagwoju anya ma ọ bụ maka ndị ahịa nwere mkpa pụrụ iche.
Usoro nhazi dị mma, Usoro Nkwado zuru oke, CEPAI na-eweta ezigbo asambodo ruru eru maka akụkụ ọ bụla. CEPAI nwere mbara igwe nke oge a, dika ebe nhazi, igwe nyocha. Igwe CNC. plasma surfacing analysislọ nyocha na nke anụ ahụ na nke kemịkalụ, na -emepụta usoro mmepụta varnish, nkpọkọ vaịn na ịwụnye ahịrị mmepụta, ijikọ aka na ịwụnye ahịrị mmepụta, ụlọ ọrụ ọgwụgwọ okpomọkụ, ngwa nhicha onwe. nrụgide / ntụgharị nrụpụta nrụpụta nrụpụta ihe ọkụkụ, akụrụngwa na-arụ ọrụ na usoro nrụpụta akụrụngwa ka ọ dị ugbu a, otu CEPAI nọgidere na-etinye ike ọrụ, akụ na ụba na ego iji mepụta ma melite ngwaahịa na ogo ya.
Hardwarelọ ọrụ akụrụngwa dị elu iji hụ na CEPAI dị ike karịa na asọmpi ahịa valvụ. CEPAI na-ebute ụzọ iwebata ngwa ọrụ mmepụta mba ofesi, dịka ụlọ ọrụ igwe ọrụ CNC iji melite ma melite akụrụngwa ngwaike n'otu ụlọ ọrụ ahụ, nke na-eme ka ọkwa dị elu nke mba anyị.
Nyocha na ikike ikike na-akwado ụlọ ọrụ ahụ iji na-erute ebumnuche dị elu ruo mgbe ebighi ebi.
CEPAI nwere ndi otu nyocha na ndi mmepe n’ulo akwukwo di elu, ikike di elu na ikike di elu. Provinlọ ọrụ nyocha na mmepe mmepe nke mpaghara na-agụnye ndị na-eme nchọpụta dị elu na-emetụta nyocha na ịzụlite valves na ngwaahịa ọ bụla ọzọ dị elu nke nwere ikike ọgụgụ isi. Ka ọ dị ugbu a CEPAI na-akwado ọtụtụ mahadum ama ama dịka Shanghai Automation Instrumentation Institute. Mahadum Shanghai Fudan, Mahadum Shanghai Jiao Tong, Mahadum Nanjing. Mahadum Jiangsu, Mahadum Nanjing nke Aeronautics and Astronautics (NUAA) na ihe ndị ọzọ iji mepụta ngwaahịa ndị kachasị elu dabere na ịme ka nkwenye dị elu na iwebata teknụzụ dị elu.
Iji nwee ihe ịga nke ọma dabere na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ, ịtọ ntọala maka mmepe n'ọdịnihu nke ụlọ ọrụ ahụ. CEPAI agbasaghị mgbalị iru isi kasị elu na echiche nke teknụzụ ọhụụ, teknụzụ teknụzụ, nyocha na akụrụngwa.
Companylọ ọrụ ahụ bụ Onye Ndú Mba na Centerlọ Ọrụ Na-agbanwe Agbanwe Agbanwe nke nwere ọtụtụ ndị ọrụ ruru eru.
Tù CEPAI nwere ebe a na-arụ ọrụ nhazi igwe 25000 nke square mita. Iji mezuo ihe a chọrọ nke valvụ na-arụpụta ngwaahịa na nnukwu ON na ọkwa dị elu, e nwere lathes vetikal na 3.5 na 2 mita, lathes kwụ na 1 .8, 1 .25 mita Ihe ọzọ bụ, iji meziwanye nkenke nhazi na ndakọrịta nke akụkụ, enwere ngwá ọrụ igwe CNC pụrụ iche, na ebe nhazi mpaghara na ogbako igwe, nke a na-eji ebupụta mmepụta nso maka valvụ nwere ojiji dị mkpa na usoro mgbagwoju anya ma ọ bụ maka ndị ahịa nwere mkpa pụrụ iche.
Nnyocha siri ike nke sitere na nhọrọ ihe, nkedo nhazi, Mgbakọ na nbipu nke nke ọ bụla Apare na ngwa ngwa.
Companylọ ọrụ ahụ nwere ụlọ ọrụ nyocha nke oge a na ụlọ ọrụ nyocha na ọgwụgwọ ọkụ, nyocha kemịkalụ, nyocha nke spectral, nyocha metallographic, nyocha arụmọrụ arụmọrụ, nnwale ray, nnwale ultrasonic, nnwale mkpụrụ ndụ magnet, nyocha ọkara na nnukwu nrụgide maka valves na na.
Dabere na echiche nke ịdị mma bụ ndụ nke ụlọ ọrụ ahụ na aha ya bụ isi nke ụlọ ọrụ ahụ, ụlọ ọrụ anyị na-akọwapụta usoro nkwa dị mma iji mezuo njikwa ngwaahịa niile maka ngwaahịa ahụ.CEPAI nwere usoro njikwa njikwa nke usoro ya. nwe. Site na mbata nke akụrụngwa na outsourcing akụkụ, machining nke akụkụ ka oku njide akara nke okokụre mmepụta, kọmputa netwọk management usoro na-etinyere na ngwaahịa mma faịlụ na-guzobere iji na-aghọta ngwaahịa traceability management. site na-esi ọnwụ na àgwà iwu nke ndị ahịa na-eche na-aghọta efu mkpesa nke ndị ahịa, dabere na usoro na-achọ maka efu ịchọpụta nke ngwaahịa, anyị na-pushing n'ihu ahịa na-eju afọ oru ngo ka afọ ju ahịa choro na-atụ anya.